होली खेलेर दुर्गन्धित भएपछि दमकलबाट पानी लगाएर बजार सफा गर्दै धनकुटा नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु
कमल थिङकाे अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन धनकुटा नगर कमिटी गठन
कमल थिङकाे अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन धनकुटा नगर कमिटी गठन तस्बीर :भिम ज्वाला राई बाट
आहा ! गुराँसलाई हिँउले स्पर्श गर्दा
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानको जंगलमा हिउँले ढाकिएको गुराँसको बोट । हिस्तानको जंगलमा यतिबेला मनै लोभ्याउने गुराँसहरु फूलेका छन् । हिउँले गुराँसलाई स्पर्श गर्दा निकै मनमोहक दृश्य देखिएको छ । तस्बिरः
बाख्रालाई स्लाइन पानी !
जाजरकोट नलगाड नगरपालिका पशु, पंक्षी शाखामा उपचारका लागि ल्याएको बाख्रालाई स्लाइन पानी लगाएर उपचार गदैँ पशु चिकित्सक । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै सेवाप्रवाहमा समेत राम्रो भएको किसानहरुले बताएका छन् ।
भुकम्प सुरक्षा दिवशका दिन धनकुटामा जे देखियो – हेर्नुस् १० तस्वीरमा
धनकुटा । कार्यक्रममा भुकम्पबाट बच्ने उपाय तथा उद्दारका बारेमा बरख गण धनकुटा र श–सस्त्र प्रहरी बलका जवानहरुले प्रदर्शनी गरेका थिए । भुकम्प सुरक्षा दिवश स्थानिय समारोह समितिको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा
यस्तो छ धनकुटाको पारीपात्लेको परिक्षण स्थलमा फलेको सुन्तला – हेर्नुस्
धनकुटा खबर । धनकुटाको पारीपात्लेमा रहेको सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमको परिक्षण स्थलमा फलेको सुन्तला । यहाँ उन्सु, ओकिचु, ओकिचुवासे, मियागावावासे, यूआरएस र पंगान लगायत २२ जातका सुन्तला र २४ जातका
निर्मलाको न्यायको लागि धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका छात्राहरु सडकमा
बलत्कारकन्चर पछि हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी १३ बर्षिया निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका छात्राहरुले निकालेको बिरोध रयाली । उनीहरुले हत्यारालाई फाँसीको माग गर्दै धनकुटा बजारमा बिरोध प्रदर्शन
बाँदरपीडितको भेलामा बाँदर !
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङका बाँदरपीडित किसानले आइतबार दिक्तेलस्थित हेलिप्याडमा आयोजना गरेको बाँदर व्यवस्थापनसम्बन्धी भेलामा एक्कासि आइपुगेको बाँदर । लामो समयदेखि आफ्नो खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली सखाप पारिदिने बाँदरले पछिल्लो समय
प्रदेश १ स्तरिय भलिबल : आज क्वाटर फाईनल, पहिलो चरणको खेल शुरु (फोटो फिचर)
धनकुटामा १ नम्वर प्रदेश स्तरिय पूरुष भलिबल प्रतियोगिता जारी छ मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमिले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा १४ जिल्लाका १४ टिमका सहभागिता रहेको खेलमा आज दिउँसो १ बजे बाट क्वाटर
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र रेष्टुरेन्टमा यसरी नाँचे (तस्विर सहित)
काठमाडौं, ९ मंसिर । शुक्रबार पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरू दरबारमार्गको त्रिसरा रेष्टुरेन्टको पार्टीमा रमाएका छन्। नारायणहिटी दरबारनजिकै रहेको त्रिसरा रेष्टुरेन्टमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वरानी कोमल आफ्ना छोरा पूर्व युवराज पारससहित राजपरिवारका अन्य सदस्यहरु